नेकपामा अब नेतालाई पनि तलब ! – AB Sansar
September 20, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on नेकपामा अब नेतालाई पनि तलब !
नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी सदस्यहरुलाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको जानकारी दिएका छन् । तत्कालीन नेकपा–एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकीकरण हुनुअघिसम्म पूर्व एमालेले आफ्ना केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्णकालीन सदस्यहरुलाई पकेट खर्च भनी नियमित तलब दिने गरेको थियो। सोही नियमलाई पुन सुचारु गरिने प्रस्ताव वैठकमा आएको हो ।
एकीकरण अघिसम्म एमालेले केन्द्रीय सदस्यलाई १० हजार र स्थायी कमिटी सदस्यलाई १५ हजार रुपैया दिने गरेको थियो। पार्टि एकिकरणपछि सो कार्य रोकिएको थियो ।पूर्व माओवादीका नेताहरुमा भने त्यस्तो ब्यवस्था थिएन । पूर्व माओवादीमा बिरामी पर्दा वा अन्य समस्या पर्दा मात्र सहयोग गर्ने गरिएको पूर्व माओवादी नेताले बताएका छन् ।
२०४६ सालमा बहुदल स्थापना हुने बित्तिकै तत्कालीन नेकपा–मालेले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मासिक एक हजार रुपैया दिने गरेको थियो। त्यो क्रमश बढ्दै १० हजार रुपैया पुगेको हो।नेकपा प्रवत्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार आइतबार पेरिसडाँडामा बसेको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव पेश भएको हो। केन्द्रीय सदस्यलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त अनुसार पैसा दिने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको हो।
निर्दोष पत्रकारको मोटरसाइकलमा लागूऔषध राखिदिएर पक्राउ गरेको पुष्टि !!